IHolo YoBukumkani YamaNgqina KaYehova: Iintlanganiso ezisekelwe eBhayibhileni veki nganye
IMboniselo | Februwari 2009
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKorea IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu isi-Igbo
MHLAWUMBI ubukhe wadlula ngakwiHolo yoBuKumkani yasekuhlaleni wazibuza ukuba kweziwa ntoni kanye kanye ngaphakathi. Ngaba ubusazi ukuba wonk’ umntu wamkelekile kwiintlanganiso zabo eziqhutywa veki nganye? Iindwendwe zamkelwa ngokufudumeleyo.
Kodwa ke, kusenokwenzeka ukuba kukho imibuzo onayo. Kutheni amaNgqina kaYehova ehlanganisana? Kwenziwa ntoni kwezi ntlanganiso? Zithini iindwendwe ezingengomaNgqina kaYehova ngezintlanganiso?
“Uze Ubahlanganise Abantu”
Ukususela kumaxesha akudala, abantu babehlanganisana ukuze banqule yaye bafunde ngoThixo. Malunga nama-3,500 eminyaka eyadlulayo, amaSirayeli ayalelwa kwathiwa: “Uze ubahlanganise abantu, amadoda nabafazi nabantwana nomphambukeli wakho osemasangweni akho, ukuze baphulaphule nokuze bafunde, bamoyike uYehova uThixo wenu, bakunyamekele ukuwenza onke amazwi alo mthetho.” (Duteronomi 31:12) Ngoko ke, onke amaSirayeli, aselula nakhulileyo afundiswa ukunqula nokuthobela uYehova uThixo.
Kwiinkulungwane ezalandelayo, xa kwaqaliswa ibandla lamaKristu iintlanganiso zaqhubeka ziyinxalenye ebalulekileyo yonqulo lokwenyaniso. Umpostile uPawulos wabhala wathi: “Kanjalo masinyamekelane, sivuselelane eluthandweni nasemisebenzini emihle, singakutyesheli ukuhlanganisana kwethu ndawonye, njengoko kulisiko labathile ukwenjenjalo, kodwa masikhuthazane, ngokungakumbi njengoko nibona ukuba imini iyasondela.” (Hebhere 10:24, 25) Njengokuba ulwalamano lwentsapho luye lusomelela ngakumbi xa intsapho ichitha ixesha kunye, ngokufanayo nothando abanalo abo bafuna ukuba ngabanquli bakaThixo luya lusomelela ngokungakumbi xa amaKristu ehlanganisana ukuze anqule uThixo.
Ngokuvisisana noko kufumaneka kwiZibhalo, amaNgqina kaYehova ahlanganisana kwiiHolo zoBukumkani kabini ngeveki. Ezi ntlanganiso zinceda abo bayayo kuzo ukuba baqonde baze basebenzise imigaqo yeBhayibhile. Apho kunokwenzeka khona, ucwangciso luyafana ehlabathini lonke, yaye intlanganiso nganye ifeza injongo yayo yokomoya. Ngaphambi nasemva kweentlanganiso abezileyo bonwabela ‘ukukhuthazana elukholweni’ ngeencoko ezakhayo. (Roma 1:12) Kwenziwa ntoni kwintlanganiso nganye?
Intetho Esekelwe eBhayibhileni
Intlanganiso yokuqala abantu abaninzi abaya kuyo ibayintetho yeBhayibhile eyenzelwe abantu bonke, yaye idla ngokuqhutywa ngempela-veki. UYesu wayedla ngokunikela iintetho zesidlangalala—enye yazo yintetho edumileyo yaseNtabeni. (Mateyu 5:1; 7:28, 29) Umpostile uPawulos wathetha namadoda aseAthene. (IZenzo 17:22-34) Elandela loo mzekelo, iintlanganiso zamaNgqina kaYehova zibaneentetho ezenzelwe abantu bonke, kuquka nabo baqalayo ukuza kwezi ntlanganiso.
Iintlanganiso ziqala ngeculo elithatyathwe kwincwadi ethi Mvumeleni Iindumiso UYehova. * Bonke abanqwenela ukuma bacule bamkelekile ukuba benze oko. Emva komthandazo, isithethi esifanelekayo sinikela intetho yemizuzu engama-30. (Funda ibhokisi enomxholo othi: “Imixholo Yeentetho Zesidlangalala.”) Intetho yakhe isekelwe eBhayibhileni. Isithethi sidla ngokucela abaphulaphuli ukuba bajonge izibhalo ezivisisana nombandela ngoxa ezifunda. Ngoko ke, usenokukhetha ukuziphathela ikopi yakho yeBhayibhile, okanye usenokucela omnye wamaNgqina kaYehova ukuba akunike ikopi yeBhayibhile ngaphambi kweentlanganiso.
Imixholo Yeentetho Zesidlangalala
Iintetho zeBhayibhile zikhethwa kwimixholo yeZibhalo eyahlukahlukeneyo engaphezu kwe-170, enjengale ilandelayo:
Imvelaphi Yabantu—Ngaba Kunomsebenzi Oko Ukukholelwayo?
Imbono Yobuthixo Ngesini Nomtshato
Ukonakaliswa Komhlaba Kuzisa Impindezelo KaThixo
Ukuhlangabezana Namaxhala Obomi
Ngaba Obu Bomi Kuphela Kwabo?
Kumabandla amaninzi amaNgqina kaYehova, intetho yesidlangalala ilandelwa sisifundo seMboniselo, esibayingxubusho yeyure yomxholo osekelwe eBhayibhileni kusetyenziswa imibuzo neempendulo. Le ntlanganiso ikhuthaza bonke abezileyo ukuba balandele umzekelo wamaBhereya exesha likaPawulos, “kuba balamkela ilizwi ngeyona ntumekelelo inkulu yengqondo, bezincina ngenyameko iZibhalo mihla le.”—IZenzo 17:11.
Isifundo seMboniselo siqala ngeculo. Umbandela oxutyshwayo nemibuzo ebuzwa ngumqhubi ivela kwihlelo lokufundisa leli phephancwadi. Unokuzifumanela ikopi yehlelo lokufundisa komnye wamaNgqina kaYehova. Imixholo ebixutyushwa kutsha nje iquka ethi: “Bazali—Baqeqesheni Ngothando Abantwana Benu,” “Musani Ukubuyisela Ububi Ngobubi Nakubani Na,” nothi “Konke Ukubandezeleka Sele Kuza Kuphela.” Nangona le ntlanganiso iqhutywa ngendlela yemibuzo neempendulo, nabani na ofunayo uyaphendula yaye ngokuqhelekileyo kugqabaza abo bebekhe bazifundela baze bacingisisa ngelo nqaku nangezibhalo ezilixhasayo kwakusengaphambili. Le ntlanganiso iqukunjelwa ngengoma nomthandazo.—Mateyu 26:30; Efese 5:19.
Isifundo seBhayibhile SeBandla
Kanye ngeveki amaNgqina kaYehova ayahlanganisana ngorhatya kwiHolo yoBukumkani kwintlanganiso eziinxalenye ezintathu zeyure nemizuzu engama-45. Kuqala Isifundo seBhayibhile seBandla esithatha imizuzu engama-25. Inceda abo bezayo kwezi ntlanganiso ukuba baqhelane neBhayibhile baze balungelelanise indlela yokucinga nesimo sengqondo sabo, baze baqole njengabafundi bakaKristu. (2 Timoti 3:16, 17) Ngokufanayo nesifundo seMboniselo, kule ntlanganiso kuxutyushwa umxholo weBhayibhile kusetyenziswa imibuzo neempendulo. Abantu bagqabaza ngokuzithandela. Kusetyenziswa incwadi okanye incwadana epapashwe ngamaNgqina kaYehova.
Kutheni kusetyenziswa uncwadi olusekelwe eBhayibhileni kwezi ntlanganiso? Ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile, ukufundwa nje kweLizwi likaThixo kwakunganelanga. ‘Wawucaciswa ngokucokisekileyo, kuchazwa intsingiselo yawo; yaye babekuqonda oko kwakufundwa.’ (Nehemiya 8:8) Kutshanje, iimpapasho ezixubusha iincwadi zikaIsaya, ekaDaniyeli, neyeSityhilelo ziye zabanceda abo beza kwezi ntlanganiso ukuba baqonde ezo nxalenye zeBhayibhile.
Emva kweSifundo SeBhayibhile Sebandla kulandela Isikolo soBulungiseleli Sobuthixo. Le ntlanganiso yemizuzu engama-30 yenzelwe ukunceda amaKristu ahlakulele ‘ubugcisa bokufundisa.’ (2 Timoti 4:2) Ngokomzekelo, ngaba umntwana wakho okanye umhlobo wakho wakha wakubuza umbuzo ngoThixo okanye ngeBhayibhile waza wakufumanisa kunzima ukuwuphendula? ISikolo sobulungiseleli sobuThixo sinokukufundisa indlela yokunikela iimpendulo ezikhuthazayo ezisekelwe eBhayibhileni kule mibuzo inzima. Ngoko nathi siyaphinda amazwi omprofeti uIsaya owathi: “INkosi enguMongami uYehova indinike ulwimi lwabafundileyo, ukuze ndiyazi indlela yokuphendula odiniweyo ngelizwi.”—Isaya 50:4.
ISikolo Sobulungiseleli sobuThixo siqala ngentetho esekelwe kwinxalenye yeBhayibhile ekukhuthazwa bonke abeza kwezi ntlanganiso ukuba bayifunde kwangaphambili. Emva kwale ntetho, isithethi siye simeme abaphulaphuli ukuba bagqabaze ngezinto abazifumanise ziyingenelo kulo nxalenye bebeyifunda. Emva kwale ngxubusho, abafundi abaye bakhetha ukubhalisa kwesi sikolo banikela iintetho abazabelweyo.
Abafundi babelwa ukuba bafunde inxalenye yeBhayibhile eqongeni okanye babonise indlela yokufundisa omnye umntu umxholo osekelwe kwiZibhalo. Emva kwentetho nganye umqhubi onamava uyabancoma abafundi ngoko bakuphumezileyo, esebenzisa incwadi ethi Zuza Kwimfundiso Yesikolo Sobulungiseleli Sobuthixo. Emva koko, ngasese, usenokumcebisa ngendlela loo mfundi anokuphucula ngayo.
Olu cwangciso alwenzelwanga ukunceda umfundi kuphela kodwa nabo bezileyo ukuba baphucule indlela abafunda nabathetha ngayo kunye nobugcisa bokufundisa. Emva kweSikolo Sobulungiseleli Sobuthixo kuculwa ingoma yokuqalisa iNtlanganiso yeNkonzo esekelwe eBhayibhileni.
Inxalenye yokugqibela yiNtlanganiso yeNkonzo. Kusetyenziswa iintetho, imiboniso, udliwano ndlebe negalelo labaphulaphuli, abo bezileyo bafunda ukufundisa inyaniso yeBhayibhile ngendlela ephumelelayo. Ngaphambi kokuba athumele abafundi bakhe ukuba baye kushumayela, uYesu wabahlanganisa ndawonye waza wabanika imiyalelo engqalileyo. (Luka 10:1-16) Ngoko babewulungele ngokupheleleyo umsebenzi wevangeli baza bafumana amava abangel’ umdla. Kamva, abafundi bakaYesu babuyela kuye nengxelo. (Luka 10:17) Abafundi babedla ngokubaliselana amava.—Izenzo 4:23; 15:4.
Ucwangciso lweNtlanganiso Yenkonzo lwemizuzu engama-35 lukuBulungiseleli Bethu BobuKumkani. Imixholo ebixutyushwa kutsha nje iquka ethi: “Ukunqula UYehova Njengentsapho,” “Isizathu Sokuba Siyiphindaphinde Intsimi,” nothi “Xelisa UKristu Xa Ushumayela.” Olu cwangciso luqukunjelwa ngengoma kuze kucelwe ilungu lebandla ukuba livale ngomthandazo.
Amagqabaza Abantu Abaye Batyelela
Amabandla azama kangangoko ukwenza bonke abezileyo bazive bamkelekile. Ngokomzekelo, uAndrew wayeve kuthethwa kakubi ngamaNgqina kaYehova. Kodwa xa weza kwintlanganiso yokuqala, wamangaliswa yindlela awamkelwa ngayo. UAndrew wathi: “Kwakumnandi ngokwenene apho. Ndamangaliswa bububele ababenabo kwanendlela ababenomdla ngayo kum.” UAshel, waseCanada, okwishumi elivisayo uthi: “Yayibangel’ umdla nyhani! Yayilandeleka lula.”
UJosé, ohlala eBrazil wayesaziwa ngokuba nguphuma silwe. Sekunjalo, wamenywa ukuba aye kwintlanganiso ekwiHolo yoBukumkani yasekuhlaleni. Wathi:“Abo babekwiHolo yoBukumkani bandamkela ngokufudumeleyo nangona babeyazi indlela endandiziphethe ngayo ngaphambili.” UAtsushi, ohlala eJapan, ukhumbula oku: “Mandivume ukuba ndandingaziva ndikhululekile kwintlanganiso yam yokuqala namaNgqina kaYehova. Kodwa sekunjalo, ndabona ukuba aba ngabantu abaqhelekileyo. Bazama kangangoko ukundenza ndizive ndikhululekile.”
Njengokuba la magqabaza angasentla sele ebonisile, ukuya kwiintlanganiso ezikwiHolo yoBukumkani akukokudlala ngexesha lakho. Uya kufundiswa ngoThixo, yaye ngemiyalelo esuka eBhayibhileni, uYehova uThixo uya kukufundisa “okuyingenelo kuwe”—Isaya 48:17.
Akungenwa ngamali kwiintlanganiso zamaNgqina kaYehova, yaye akukho nkongozelo. Ngaba ungathanda ukuza kwintlanganiso eziqhutywa kwiHolo YoBukumkani yasekuhlaleni? Nceda uze.
^ isiqe. 10 Zonke iimpapasho ekubhekiselwa kuzo kweli nqaku zipapashwe ngamaNgqina kaYehova.
Sikumema Ngokufudumeleyo Kwiintlanganiso Zethu
IMBONISELO Februwari 2009